Maxkamad Mareykan ah oo xukuntey haween Somaliyeed
26 August, 2015 (GO)-Maxkamad racfaan oo federalka Mareykanka ah ayaa dib u xaqiijisay xukunkii lagu riday laba haween ah oo lagu helay dambi ah inay doonayeen inay lacag u diraan kooxaha argagixisada ee Soomaaliya.
Guddi garsoorayaal ah oo ka kooban saddex qof, kana tirsan maxkamadda sideedaad ee racfaanka federaalka Mareykanka, ayaa dib u xaqiijiyey go’aankii xukunka ugu ridey haween Somali ah, waxayna sheegeen inuusan wax qalad ah ku jirin go’aankaasi ay gaartay maxkamaddii hore.
Haweenkan oo asal ahaa ka soo jeeda Somalia ayaa ku nool magaalada Minnesota ee dalka Mareykanka,waxaa lagu soo eedeeyay inay taageero dhaqaale u fidinayeen ururka Al-shabaab.
Aamina iyo Xaawo oo ah haweenka la xukumey ayaa sheegaya inay caawinayeen dadka saboolka ah ee Somalia, hase yeeshee dacwad oogayaasha ayaa ku eedeeyey inay lacag u uruurinayeen ururka Al-shabaab.
Aamina ayaa waxaa lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah, halka Xaawo lagu riday xukun dhan toban sano.
Labadan hablood ee somalida ah ayaa ku guul dareystey racfaan ay ka qaateen xukun ay ku ridey maxakamad hore.